Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဒီဘီဗွီသတင်းဌာနသို့ “ခိုင်မင်းညို”မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ဒီဘီဗွီသတင်းဌာနသို့ “ခိုင်မင်းညို”မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ခိုင် မင်း ညို
အကြောင်းအရာ။ ။ သတင်းမှားခြင်းအားပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း။
အထက်ပါအကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ၂၀၁၂-ခု၊ ဇွန်လ ၉-ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော သတင်း "ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးရွှေတိဂုံဘုရားတွင်ဆန္ဒပြ" ဟုသော သတင်းတွင် အနည်းငယ် လွဲမှားမှုရှိနေပါသဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ DVB မှ ပီတာအောင်တင်လိုက်သော ၎င်းသတင်းပါ "ဇွန်လ ၈-ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တချို့ရဲ့လူနေအိမ်တွေကို မီရှို့ဖျက်ဆီးမှု လူတချို့အား သေကြေဒဏ်ရာရအောင်လုပ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ" ဟု သတင်းရေးသားချက်သည် ဆီလျော်ခြင်းမရှိပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ လူနေအိမ်တွေကို မီးရှို့တာနှင့်ပက်သက်ပြီး ရခိုင်များ ဆန္ဒပြစရာအကြောင်းမရှိပါ။ DVB အနေဖြင့် ခင်ဗျားတို့ Mission အရဆိုရလျှင်လည်း Accurate လုံးဝမဖြစ်ပါ။
အမှန်တကယ်လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတာကလည်း ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အိမ်တွေကို ဘင်္ဂလီကုလားတွေက ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး မီးတိုက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာသတင်း၊ မြန်မာပြည်သတင်း စသည်ဖြင့် သတင်းများကို update ဖြစ်ပြီးလျှင် မှန်ကုန်မှုရှိသော DVB သည် သတင်းမှားရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ မိမိစဉ်းစားသည်မှာ ယခုသတင်းပေးသော သတင်းသမား၏ သတင်းလိုက်မှု အားနည်းချက်ကြောင်းလည်းကောင်း၊ အလုပ်များလှသော အယ်ဒီတာ မျက်စိလျှမ်းသွားခြင်းအကြောင်းလည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် မောင်တောမြို့၏ ဆက်သွယ်မှုအရ ဆက်သွယ်ရေးအားနည်းချက်ကြောင်းလည်းကောင်း၊ သတင်းပေးသူ၏ မှားယွင်းမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိတို့ သတင်းတချက်မှားသွားလိုက်လျှင် နောက်ဖြစ်လာမည့်အကျိုးဆက်သည် ထုနဲ့ထေးရှည်လျှားလှသည်။ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော မောင်တောအရေးအခင်းနှင့် ပက်သက်၍ ခင်ဗျားတို့ သတင်းဌာနအား ပြည်သူများမှ အထင်အမြင်လွဲမှားသွားခြင်း၊ သတင်းမှန်ကန်တိကျမှုကင်းမဲခြင်းကြောင့် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ ဘီဘီစီကဲ့သို့ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည့်နောက်ဆက်တွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် ယခု ဤတောင်းဆိုချက်ရသည့်အချိန်မှစ၍ အယ်ဒီတာအဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုသတင်းအား ပြန်လည်တောင်းပန်ပြင်ဆင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီဘီဗွီသတင်းဌာနမှ အလိုရှိလျှင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မောင်တောဒေသ၌ ဘင်္ဂလီမူဆလင်းများ အကြမ်းဖက်ရက်စက်ပုံများကို ပူးတွဲ ပို့ပေးလိုက်ပါသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:49
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဒီဘီဗွီသတင်းဌာနသို့ “ခိုင်မင်းညို”မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ . All Rights Reserved